Ụtụ maka Notre-Dame - 1aviagem.com
Previous post: Como se deslocar em Paris?
Next post: Dicas do que fazer em Barcelona
Edebere 19 2019 June site Römulo Lucena
Amaghị m otú m ga esi amalite nke a, m ga-agwa gị ihe echiche ahụ bụ.
Ọ bụ iji mee ka a na-eme ihe na-eme ka Kathedral nke Notre-Dame, bụ nke a na-ere ọkụ na 15 / 04 / 2019.
Ọ bụ ihe na-akpali ọtụtụ mmadụ, ma e wezụga ọgba aghara na mwute ọ na-eweta. Maka mụ na ndị enyi na ezinụlọ na France na-aga France mgbe ọkụ ahụ mere dịtụtụ. Ma site na ịbịakwute ha, enwere m ohere ị gaa na ụbọchị Xandum Cathedral tupu ọdachi ahụ. N'ezie, m mere ụfọdụ agbapụ ma were ụfọdụ foto. Mgbe ahu biara n'echiche, gini mere na isoro ha na uwa mara nma na olu nke Katidral? Egwuregwu nke Notre-Dame dị nnọọ iche. Ma ọ bụghị onye ọ bụla nwere ohere m ga-eleta ya n'oge ikpeazụ. Ya mere, post a ga-enwe vidiyo karịa vidiyo, n'ihi na echiche ahụ bụ ime ka ị nweta ahụmahụ na-agụ na obere ebe a. Bịa?
Katidral gothic nwere ihe karịrị afọ 850. Ma ọ bụ maka ndị ọkụ na-ere ọkụ na isi ihe na-eguzogide ọkụ ma nọgide na-eguzo. Otú a ka ọ dịkwa.
O di nwute na ụlọ elu (akụ) nyere aka ma daa. na-ewere ya na ya ma na-emetụta akụkụ nke etiti nke katidral.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na amaara Notre Dame maka ihe nkiri ya. N'ihi ya, m kpebiri na m ga-ege ntị na vidio ndị a, ọ dịghịkwa edetu edere na ụda ma ọ bụ na-aga n'ihu. O doro anya na e nwere njedebe nke ngwa, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime vidio ahụ nwere ekwentị (nke na-abụghị n'elu akara) ma ọ ga-ekwe omume inwe mmetụta nke ụda dị.
Ma akụkụ nke facade nwere ọchịchọ ịmata banyere ihe oyiyi. N'ezie ha na-anọchi anya usoro 28 nke ndị eze Juda. Ọgbọ XNUMM ruo mgbe Eze Devid na 14 ruo Jizọs.
Ma ndị France kweere na ha gosipụtara ndị eze France. Ya mere, mgbe mgbanwe nke French malitere, ha mebiri ihe oyiyi ahụ dị ka ụzọ isi mee mkpesa megide ndị eze France. N'okwu French a ma ama, ọ nwere iwu: Freedom Equality Fraternity.
Ebe ọdịda nke Notre-Dame na-agwa ụfọdụ akụkụ nke ozioma, karịsịa Oziọma Matiu. Nlekọta anya ga-ahụ na facade bụ akụkụ nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ e dere n'ụdị ihe oyiyi.
Egwú ndị ahụ na-ejiri akara awa na-egwuri egwu iji gosipụta njedebe nke agha ụwa mbụ na ntọhapụ nke Paris na Agha Ụwa nke Abụọ. Na square n'ihu Katidral bụ ebe ikpeazụ French Knights Templar e ọkụ.
N'ikpeazụ n'ime faịlụ m, achọtara m ihe osise ikpeazụ m weere na Katidral nke Notre-Dame n'abalị, hụrụ na njem ụgbọ mmiri.
Na iche na vidio ndị a sitere na 3 ụbọchị tupu nke ahụ emee. Ọ bụ ihe ndabara ọma na zutere katidral na mbụ njem na France. Ya mere m wetara ntakịrị n'ime ya na post a.
Kedu ihe ọzọ dị mkpa na Katidral?
Ọfọn, ọ bụ ihe karịrị 850 afọ nke akụkọ ihe mere eme ma echere m na akụkọ ya dị oke mma.
A malitere iwuru Lady-Dame na 1.160 ma wuchaa 180 afọ ole na ole, na-enweta mmetụta ụlọ ụlọ ma ọ dịkarịa ala oge abụọ. Ndị Rom, na ndị Goths.
Ọ bụ na Napoleon Bonaparte kwupụtara onwe ya Eze. Ọ na-ewepụta okpueze n'aka Pope ma tinye ya n'isi ya.
Nave nke katidral dị ka obe, nke a na-adịghị ahụ anya site n'èzí, ebe ọ bụ na ụlọ elu ahụ na-ele anya na-ele anya na-ele anya na-ele anya na-ele anya na-ele anya.
E mere windo ndị a na-acha ọcha iji mee ka ìhè dị n'ime ime ụlọ katidral ahụ na mosaics na-ewetara akụkọ banyere Kraịst. Ọ na-eme ka onye ọ bụla bata. N'adịghị ka katidral Gothic ndị ọzọ, mgbe ị banyere Notre-Dame, obi na-atọ gị ụtọ na ị gaghị atụ ụjọ. Ihe dị iche bụ ọkụ na-abata.
Ihe osise na akụ ndị e chebere n'ime ya nke Alaeze Ukwu Byzantine. Ọbụna a kwudịrị na a na-echekwa otu okpueze ogwu site n'isi Jizọs.
Ọnụnọ gị na n'ike mmụọ nsọ maka akwụkwọ. Dịka ọmụmaatụ m na-agụpụta akwụkwọ a ma ama: The Hunchback nke Notre-Dame, nke bụ French Victor Hugo nke 1831, nke mesịrị Disney ghọọ ihe nkiri. Ọhụụ a na-eme site na Katidral, bụ ebe Quasimodo ji obi ebere aha ya bụ Esmeralda.
Ihe coral na ihe omume mere na ya.
E nwere ọtụtụ ihe na ọ bụghị ihe ijuanya na ọ na-enweta ihe karịrị mmadụ 13 nde mmadụ njem kwa afọ. Ịbụ otu n'ime ihe oyiyi nke Paris.
Akụkụ dị mma nke akụkọ ahụ bụ na a na-ewughachi ya, mgbe niile, ọ ga-abụrịrị ịmeghachi mgbe 850 afọ nke akụkọ ntolite abụghị n'ezie.
Gịnị kpatara ọkụ ahụ?
Nkwuata mbụ bụ ihe iyi ọha egwu. Ma nyere oge mgbe ọkụ ahụ mere na eziokwu ahụ bụ na ọ dịghị ndị nwụrụ anwụ, a kwụsịrị ikwu okwu a.
Nkwupụta ọzọ ga-abụ sekit dị mkpirikpi, ebe ọ bụ na a ga-enwe ihe omume a ga-eme na ya maka echi ya.
N'ikpeazụ, ihe yiri ka ọ bụ echiche kachasị mma, ọ dị ka ọ bụ ihe n'oge ọrụ mweghachi, ma eleghị anya a na-agba sịga ọkụ, ma eleghị anya ọdịda nke kandụl ahụ, enweghị nkwenye.
Anọ m na-anọ ebe a, ana m enwekwa olileanya na m wetaara ụfọdụ ndị na-enweghị ike ịga leta ya. Echere m na ọ ga-emepeghachi n'oge na-adịghị anya ma nwee ike leta gị ọzọ.
Na-ebi na French, N'ihe ọzọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe, ma ọ bụ chọọ inye onyinye, nweta njikọ a, nke bụ katidral.
Ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị echefula ịdebanye aha na ịhapụ mmasị a na post. =)